Ejipta: Atahorana ho ampijaliana ilay bilaogera Ahmed Abou Doma nogadraina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Janoary 2019 4:03 GMT
Nisy ny tatitra nalefa tany amin'ny Mpampanoa lalàna Ejipsiana milaza fa niharan'ny herisetra ilay bilaogera notazonin'ny polisy, Ahmed Abou Doma.
Araka ny tatitra, dia niharan'ny fampijaliana ara-tsaina sy ara-batana ilay tanora bilaogera (23 taona). Torture in Egypt (fampijaliana ao Ejipta) nilaza araka ny mpisolovavan'i Doma hoe:
Niharan'ny herisetra ara-tsaina sy ara-batana tany amin'ny paositry ny polisy tao Al-Khalifa ilay bilaogera notanana, raha nafindra tany am-ponja. Nokapohina tamin'ny hazo izy ary tsy naha-hetsika nandritra ny ora maro ny vatany.
Nosamborina i Ahmed Abou Doma tamin'ny fiverenany avy tany Gaza tamin'ny alalan'ny Fiampitana ny Sisintany Rafah. Noampangain'ny manampahefana Ejipsiana fa niditra antsokosoko tao amin'ny sisintany atsinanana izy tamin'ny fanitsakitsahana ny didim-panjakana 298 tamin'ny 1995. Tamin'ny volana lasa teo, dia notsaraina tao amin'ny Fitsarana Miaramila tao an-tanànan'i Ismailia any Ejipta i Doma ka voasazy higadra herintaona an-tranomaizina sy mandoa onitra 2000 livra (ejipsiana).
Mitantana bilaogy antsoina hoe Sha’er ikhwan (Poeta Ikwani) i Ahmed Abou Doma, izay anoratany ny tononkalony sy ny lahatsorany, anehoany ny fomba fijeriny ara-politika. Navoakany tao amin'ny bilaogy ireo sary nalainy tany Gaza nandritra ny fitsidihana, izay nitarika azy ho any am-ponja. Taorian'ny fisamborana azy, dia nohavaozin'ireo namany ny bilaoginy. Hita ao amin'ny bilaogy ny taratasy nalefan'i Doma fotoana fohy taorian'ny sazy azony.